YAANYO "CASPAR" F1: SHARAXAADA KALA DUWAN, SIFOOYINKA DHALIDDA, TALOOYINKA LOOGU TALAGALAY YAANYADA SII KORDHAYA - BEER CAGAARAN
Waxyaabaha ugu fiican ee caanaha - sharaxaad iyo dabeecadaha yaanyo isku dhafan "Caspar"
Casot hybrid yaanyo waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee caanaha. Waxay soo saartaa yaanyada ugu delicious ee casiirkiisa. Tani ma aha faa'iidada keliya ee ka dhigaysa tamaandhadani mid ka mid ah kuwa ugu jecel ee beeraha Ruush.
Wax-soo-saarka wanaagsan, Bisaylkiisa hore iyo muddada uu fruiting, dhadhanka fiican - kuwan waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka yaanyada kuwaas.
Haddii aad xiiseyneyso noocyada kala duwan, akhri si aad u hesho sharaxaad buuxda, si aad u ogaato sifooyinka iyo murugada maareynta beeraha.
Yaanyo "Caspar" F1: sharaxaadda noocyada kala duwan
Magaca dugsiga Caspar
Sharaxaad guud Hore u bislaaday, dhexdhexaad ah oo loogu talagalay koriyo iyo dhulka furan
Bisaylka 85-90 maalmood
Foomka Miraha waa la tallaalay
Midab Casaan casaan
Cunto dhexdhexaad ah 80-120 garaam
Codsiga Yaanyada Universal, oo aad u fiican caanaha
Noocyo dhaadheer 10 kg mitir labajibbaaran
Noocyada sii kordhaya Qorshaha geedo beerto - 30 x 70 ama 50 x 70 cm isla waqtigaas 1 dabaq ah. m ayaa si deggan u kori doona 7 ilaa 9 duurka.
Cadaadiska cudurada Kala duwan ayaa u adkaysata cudurada ugu weyn ee yaanyada
Guud ahaan farsamooyinka Dutch ayaa dhawaan lagu daray diiwaanka Gobolka ee Guulaha Gaarista ee Russia - ee 2015. Qofka asal ahaan ka soo jeeda waa qalabka beeraha ee Sedek, iyo qorayaasha ayaa ah kuwa xayawaanka Dutch ah.
Gobollada hore u bislaaday waxay leedahay mudo ah bislaado 85-90 maalmood aqalka dhirta lagu koriyo iyo ilaa 120 maalmood oo ah dhul furan. Gobolada diiran, goosashada ugu horeysay waxaa la qaadan karaa horaantii bisha Juun. Fruiting sii socdo ilaa dayrta. Meelaha qaboobaha, dalagga ugu horreeya ee bilaha ah ee July.
Caspar waa noocyo kala duwan oo loogu talagalay dhul furan oo lagu koriyo. Waxay ku haboon tahay beerashada dhammaan gobollada Ruushka. Ku saabsan fasalada aan caddayn ee halkan ka akhriso.
Muddo dheer oo ah dhexdhexaad ah ee dhexdhexaad ah waa qasab iyo iska caabin cudur. Ma aha inuu ka baqo cayayaanka, taas oo ah qodobka ugu nugul ee geedaha qaangaarka ah. Tomato "Caspar" F1 ayaa kori kara xitaa bannaanka udgoonaya, maadaama ay tahay mid aan qabyo ahayn oo sahlan.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee miro:
Midhaha "Caspar" waxay leeyihiin qaab muuqaal ah, oo ah mid ka mid ah basbaaska macaan ee reer Bulgarian, oo leh dabeecad caan ah.
Miraha aan la soo saarin waa cagaar iftiin oo midab leh, miraha bislaaday waa orange-cas.
Miisaanka celceliska - min 80 ilaa 120 g.
Waxay leeyihiin dhadhan yar yar iyo urta yaanyo dabeecad ah.
Miraha yar-yar, waxay leeyihiin 2-3 ceel oo kaliya.
Diirka yaanyo waa mid adag oo adag, marka loo isticmaalo salad cusub waxaa lagu talinayaa in laga saaro.
Sababtoo ah saxarada cufan, yaanyada, xitaa maqaarka, ha faafin oo ha ku dhicin suxuunta.
Miisaanka midhaha noocyo kale oo yaanyo ah ayaa laga arki karaa miiska:
Caspar 80-120 garaam
Fatima 300-400 garaam
Verlioka 80-100 garaam
Qaraxa 120-260 garaam
Altai 50-300 garaam
Jalandha qajaje 150 garaam
Grapefruit 600 garaam
Diva 120 garaam
Red Guard 230 garaam
Buian 100-180 garaam
Irina 120 garaam
Nin caajis ah 300-400 garaam
Sababtoo ah cufnaanta cufan, yaanyo "Caspar" ayaa loo tixgeliyaa sida ugu wanaagsan ee loogu diyaariyo miraha qasacadaysan ee casiirkiisa iyo khudaarta kala duwan. Miraha waxaa si fiican loo kaydiyaa oo la qaadaa, maaha maadeysi. Cuntada waa ilaa 10 kg halkii 1 sq. m
Waxaad isbarbardhig kartaa tusahan tilmaamahan noocyada kale ee hoos ku qoran:
Caspar 10 kg mitir labajibbaaran
Pink Lady 25 kg halkii mitir labajibbaaran
Red Guard 3 kg oo baadiyaha ah
Qaraxa 3 kg oo baadiyaha ah
Batyana 6 kg oo baadiyaha ah
Sonkorta Brown 6-7 kg halkii mitir labajibbaaran
Akhri sidoo kale boggayaga internetka: Sida loo helo goosashada weyn ee berrinka bannaan? Sida loo koro yaanyada tufaaxa oo dhan sanadka oo dhan in lagu koriyo ah?
Waa maxay noocee ay leeyihiin dhalidda sare iyo difaaca wanaagsan? Maxay yihiin dhibcaha ugu muhiimsan ee noocyada hore u sii kordhaya oo qiimo leh?
Waxaan ku siinaynaa si aad u barato yaanyada iyo noocyada duurka "Caspar" ee sawirka:
Bushku wuxuu koraa illaa 50-100 cm, asliga ah ayaa ku socon kara dhulka. Si looga fogaado koritaanka xad-dhaafka ah ee cagaarshow, wuxuu ubadkiisa koray oo koray 2 caws. Si looga hortago in lala xiriiro midhaha dhulka, baadiyaha waa in loo xiraa taageero.
Tani noocyo kala duwan oo yaanyo ah ayaa kuu oggolaanaya in aad si firfircoon u isticmaasho meelaha beeraha lagu koriyo iyo sariiraha beerta. Qorshaha geedo beerto - 30 x 70 ama 50 x 70 cm isla waqtigaas 1 dabaq ah. m ayaa si deggan u kori doona 7 ilaa 9 duurka.
Abuuridda abuurka geedo waxaa la sameeyaa maalmaha ugu dambeeya ee March ama horraantii Abriil. Diyaarinta daaweynta waxay ka kooban tahay qallajinta kiniinka potassium, ka dibna waxaad isticmaali kartaa kiciyaha kobaca. Waa muhiim in la doorto ciidda saxda ah ee beerto. Seeds waxaa lagu beeray qoto dheer oo ah 1 cm. Ka dib markii muuqaalka ah 2-3 ee caleemo saaro, waxay ku quusiyaan.
Waxay u baahan yihiin waraabinta marxaladaha iyo quudinta 2-3 jeer inta lagu jiro koritaanka geedo. Ka hor inta aan dhulka la dhigin waxaa la quustay 14 maalmood. Si arrintan loo sameeyo, galabtii waxay u egtahay hawada furan. By transplanting geedo diyaar u ah da'da 55-70 maalmood.
Xilliga dhulka waxaa la fuliyaa dabayaaqadii May kadib markii dhaxantii ugu dambaysay. Ciidda yaanyada waa in ay noqdaan biyo iyo neefsasho, bacrin ah. Marka abuuritaanka geedo ee godka waxaa lagula talinayaa in lagu daro 10 g of superphosphate. Daryeelka aasaasiga ah wuxuu ku lugleeyaa marxaladaha mudnaanta ee tallaabooyinka, waraabinta, dabacsanaanta ciidda iyo dhirta, mulching.
Ha ilaawin wareegga saxda ah. Ha beerin yaanyo on carradu meesha dalagyada bidixda hore u koray. Kuwa ugu fiican ee ka soo horjeeda waxay noqon doonaan karootada, bagalka, radishes ama basasha. Tamaandho "Caspar" waxay jecel yahiin waraabin badan. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in aysan jirin qoyaan joogta ah ee ciidda.
Inta lagu jiro koritaanka oo dhan iyo ka hor fruiting, yaanyo la quudin leh Bacriminta macdanta leh fosfooraska iyo potassium. Bacriminta markii ugu horeysay waxaa lagu dabaqaa muuqaalka ka dib ugxansiisaha ugu horeeya, ka dibna wakhtiyada caadiga ah waxay ku qaataan 3 quudin dheeraad ah.
On our site waxaad ka heli doontaa articles badan oo waxtar leh oo ku saabsan bacriminta yaanyo.:
Bacriminta for geedo.
Dhismayaasha diyaar u ah.
Dusha ugu fiican.
Sidee loo fuliyaa quudinta foliar?
Bacriminta dabiiciga ah.
Kala duwan ayaa u adkaysata cudurrada ugu weyn ee yaanyada loona yaqaan "tomatoes" waana mid aan lagama maarmaan ahayn in la qaado tallaabooyin lagula dagaallamo. Laakiin waxaan ku siin karnaa macluumaad ku saabsan mawduucan. Akhri dhammaan wixii ku saabsan:
Daahfurka iyo ilaalinta ka dib.
Tamaandho u adkaysta phytophthora.
Sidoo kale akhri websaydheena: Waa maxay sababta cayayaanka iyo fungicides looga baahan yahay yaanyada sii kordhaya? Cudurada nooca badanaa ugu hanjabaan yaanyada lagu koriyo iyo sida loo maareynayo si waxtar leh?
Waa maxay noocyada ciidda ku habboon beerto yaanyada? Sida loo diyaariyo ciidda aqalka dhirta lagu koriyo si loo beero guga?
Raac xeerarka fudud ee tiknoolajiyada beeraha, iyo balanqaad si aad u hesho dalagyo cajiib ah oo noocyo yaanyo ah "Caspar" F1!
Jadwalka hoose waxaad ka heli doontaa isku xidhka noocyada tamaandhada ah ee dhirta kala duwan:
Aad u fiican Xilliga bartamaha Gaar ahaan hore
Schelkovsky horaantii Demidov Budenovka
Madaxweyne 2 Persimmon F1 waaweyn
Liana Pink Honey iyo sonkorta Cardinal
Locomotive Pudovik Dhaqso
Sanka Pound Rosemary Pound King Penguin
Mucjisada qorfe Boqorka quruxda Emerald Apple